Hantiwadaaggii Soomaaliya Iyo Wixii Laga Dhaxlay Nidaamkii Siyaad Barre. | Qorilugud News 24
Konton sano ka hor maanta oo ah Soomaaliya, inqilaabkii militariga ee Maxamed Siyaad Barre wuxuu soo afjaray muddadii yareyd ee dimuqraaddiyadda ahayd ee Soomaaliya, taas oo dhabaha u xaartay dagaal sokeeye markii ugu dambeyntii talisku burburay. Dhaxalkiisa la isku haysto wuxuu kala qaybiyaa Soomaalida ilaa Maanta.
Subaxnimadii 21-kii Oktoobar 1969-kii, Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee dhallinta yaraa, Radio Muqdisho wuxuu subaxa hore qaadi jirey muusig Military oo aan caadi ahayn, isaga oo ka leexanayey barnaamijyadiisii ​​caadiga ahaa, oo ku bilaabmay isku soo wada duuboo wararka adduunka.
Toddobaad uun ka hor Madaxweynihii xilka hayey Cabdirashiid Cali Shermarke, ayaa lagu khaarijiyey fal ay taariikhyahannada qaarkood aaminsan yihiin inuu ahaa ficil ay dhiiri-gelisay Midowgii Soofiyeeti. Maalin un ka hor Ra’iisul Wasaare Muxamed Cigaal wuxuu qaybinayey lacag uu ka soo dhacay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo ay ka dhex heleen siyaasiyiin musuqmaasuq wada. Wuxuu is arki lahaa isaga oo xabsi guri ku jira maalinta xigta, 21-ka Oktoobar, koox ka mid ah Askarta anshax xumada ah, halka kuwa la shaqeeya ay kaxeysteen dad badan oo rapturo u ah madaxweynenimada Afgoi halkaas oo lagu xidhi doono iyaga iyo xildhibaanno kale.
Dawladda ayaa lagu wargeliyey inay kala dirtay militeriga. “Waxba ma tihid,” mid ka mid ilaalada ayaa ku yidhi.
Mohammed Siad Barre intii lagu gudajiray xuska sanadguurada afgambiga bishii Oktoobar 1977 (Sawirka Jean Claude FRANCOLON / Gamma-Rapho). (Sawirada Getty)
Dadweynaha ayaa si xamaasad leh u soo dhoweeyay inqilaabka, dhowr maalmood oo keliya ka dib ayaa la ogaan doonaa in Siyaad Barre, oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, uu abaabulay hawlgalkii lagu soo afjaray xilligii Soomaaliya ee muddada yareyd iyo rajada laakiin dhibka dimuqraadiyadda.
Aadan Shire Lo, oo ah xildhibaan la xiray, wuxuu seedigii ka ahaa xaaska Barre. Markii ay ogaatay afgembigii, Aadan xaaskiisii ​​waxay booqatay madaxweynihii hore Aadan Cabdulle Cismaan, oo looga adkaaday doorashadii 1967, waxayna u sheegtay “tani waa bilowgii dhammaadka Soomaaliya” . Hadalkeedu wuxuu ahaa mid sii sheegid ah.
Tani waxay ahayd mid ka mid ah xilliyadii ugu muhimsanaa ee taariikhda xorriyadda ka dib, Siyaad Barre – oo la oran karo waa hoggaamiyaha ugu saameynta badan dalka – isagoo adeegsanaya habab kali-talisnimo ah oo lagu horumarinayo dalka, ka hor intaan taxadiyado isdaba-joog ah oo ay uga sii dartay hannaankiisa culus ee uu kula dhaqmayo dowladnimada Soomaaliya u rogin waxa indha indheeyayaasha casriga ahi ay inta badan dhahaan waa “dal fashilmay” ka dib markii xukunkiisii ​​dhacay.
Hooskiisa wali wuxuu kujiraa siyaasada soomaaliya ilaa maantadan la joogo, isaga oo u kala qeybinaya dhibanayaasha danbiyadiisa kuwa dib u milicsada noloshoodu noloshoodu ku jirto soomaaliya oo aad uga nabdoon.
Xilligii Hantiwadaagga Barre
Siyaad Barre wuxuu dhashay horaantii qarnigii 20-aad ee Talyaanigii Somaliland, siyaabo badan wuxuu uga mid ahaa wax soo saarkii gumeystihii uu markii dambe ku caasiyoobay. Wuxuu ku biiray Carabinieri Talyaani xitaa wuxuu ka soo shaqeeyey ololihii Talyaaniga ee ka dhanka ahaa Itoobiya. Markii ay Soomaaliya ka hoos baxday Maamulka Milatariga ee Ingiriiska, wuxuu sii waday kor u qaadista xafiiska ugu sarreeya ee qof Soomaali ah uu qaban karo oo ah kormeere bilays. Markii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay ee Ciidanka Booliska Soomaaliya ay isu beddeleen ciidankii jamhuuriyadda cusub, wuxuu aakhirkii u dallacay xagga sare ee ciidammada qalabka sida ee Soomaaliya, ka dib dhimashadii taliyihii hore Jeneraal Daa’uud Cabdulle Xersi oo ku dhintay magaalada Moscow, ka hor intii aanu afgembinin dawladda 1969.
Oktoobar 24, khudbadiisii ​​ugu horreysay ee afgembiga ka dib, Siyaad Barre wuxuu dejin lahaa hab cusub oo dalka ah.
“Farogelinta ciidamada qalabka sida waxay ahayd lama huraan,” ayuu yiri. “Waxaan jeclaan lahaa inaan ka codsado dhamaan dadka Soomaaliyeed inay u soo baxaan dhismaha qarankooda, qaran xoog leh, si ay ugu adeegsadaan dadaalkooda, xoogooda, maalkooda iyo maskaxdooda horumarinta dalkooda,” ayuu sii raaciyay.
“Imperialists, oo had iyo jeer doonaya inay arkaan dad gaajo, cudur iyo jahli leh, ayaa naga hor imaan doona si aan uga barinno… aan gacmaha is qabsano si aan u burburinno cadowga dhulkeena.”
Markay tahay Nofeembar 1, wuxuu laali lahaa dastuurka, kala diri doonaa baarlamaanka, wuxuu mamnuuci doonaa xisbiyada siyaasadeed wuxuuna baabi’in doonaa Maxkamadda Sare. Iyadoo aan lagaranayn wax macno leh, dalka waxaa markii dambe loo bixiyay Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya, waxayna dhagar qabayaashu aasaaseen Golihii Sare ee Kacaanka.
Mohammed Abdulrahman, oo markii dambe ka shaqeyn lahaa Wasaaradda Xannaanada Xoolaha, wuxuu ahaa arday dhigta dugsiga sare markii afgembiga dhacay wuxuuna si xusuus leh u xusuustay munaasabadda. “Dhammaanteen waxaan ahayn kuwa faraxsan,” ayuu yiri. “Ardayda waxay u baxeen banaanka iyagoo ordaya wadooyinka, waxaan tuuraynay buugaagteena. Waxaan xasuustaa maalintaas, runtii waxay ahayd maalin gaar ah, waxaanan rajo weyn ka qabnay waxa iman doona, siddeedda sano ee soo socotana wax badan ayaa la qabtay. ”
Wuxuu intaas ku daray: “Taasi waxay ahayd isbedelka Soomaalida, dadku waxay ka dheregsanaayeen dowladdii hore ee musuqmaasuqa iyo qabyaaladda sheeganaysay inay na metelayso. Xilligaas, dowladda aad ayey u xumeyd oo kama aanan fikirin cawaaqibka ka dhalan kara. ”
Boodhadhka furuqa ee hareeraha waddooyinka Muqdisho oo dhan oo la siinayo abaalmarin dhan 200 oo Shilin Soomaali ah ama $ 30 qofkii soo sheega kiis cudurka furuqa ah. (Sawirada Getty)
Barre wuxuu isla markiiba bilaabay inuu ku abaabulo bulshada Soomaaliyeed xoogagii Jupiter ee uu ku urursaday laanta fulinta ee dowladda, isagoo rajo ka qabay inuu dhiso bulsho hantiwadaag ah. Hantiwadaag, macno ahaan ‘wadaagista hantida’ Soomaali, ama hantiwadaag, waxay ahayd inuu dhowaan noqdo fekerka cusub. Sidoo kale Soomaalida waxaa lagu amray inay isugu yeedhaan ‘jaalle’, oo ah u dhigma Soomaaliga jaal. Barre wuxuu qaadan lahaa cinwaanka Guulwade, ama Hoggaamiye Guul leh, maaddaama uu bilaabay inuu ka shaqeeyo abuuritaanka dhaqan shakhsiyadeed.
Markii la waydiiyay waafaqsanaanta Islaamka – caqiidada inta badan dadka Soomaalida ahi u hoggaansamaan – iyo hantiwadaagga, Barre wuxuu ku jawaabay : Waxaan leenahay, ‘Aaway khilaafkii? Is burinta waxaa abuuray nin kaliya. ”
“Waa in la kala duwanaadaa sannadihii ugu horreeyay iyo 1976 wixii ka dambeeyay” Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, oo ah qoraa ka tirsan Dimuqraaddiyadda Koowaad ee Afrika ayaa u sheegay TRT World. “Sida ay ula macaamileen abaaraha, taas oo ka hortagtay abaar baahsan tusaale ahaan. Soo bandhigida af soomaali qoran ayaa ilaa maanta laga isticmaalaa wadamada jabuuti, itoobiya iyo somalia, ololaha aqriska iyo qorista ee ku guulaystay abaalmarinta, hagaajinta daryeelka caafimaadka, waxbarashada guud iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo kafiican. Kuwaasi waxay ahaayeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa, laakiin marwalba waxaa jiray isbeddello kali talisnimo ah oo xukunkiisa ka dhaca.
Dhaqanka casriga ah ee soomaalida sidoo kale runti waa laga baxay, ayuu yidhi borofisar Samatar, oo inta badan leh dabeecad adag oo ka soo horjeedka gumeysiga iyo dabeecadda Afrika oo dhan oo leh heeso sida ‘Lafta ayaa ku jirta Taariikhdan iyo Wada Jir Diidmada Gumaysiga.
“Runtii waxay dadka ku abaabuleen muusig, tiyaatar, xiriirka dadweynaha iyo waxyaabo kale,” ayuu yiri Abdulrahman. Waanuna ku faraxsanahay doorkii aan ka ciyaarnay taakuleyntii dhaqdhaqaaqyadii kale ee xoreynta Afrika ee Zimbabwe, Koonfur Afrika iyo meelo kale.
Qoraal lagu xardhay darbiyada caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo cambaareynaya faragalinta Russo-Cuba ee Dagaalkii Ogadeen ee dhinaca Ethiopia. Dadaalladii wadajirka ahaa ee Midowgii Soofiyeeti iyo ciidammada Kuuba waxay ku qasbeen Soomaaliya inay dib u gurasho (Sawirka waxaa qoray Jean-Claude FRANCOLON / Gamma-Rapho adoo adeegsanaya Getty Images) (Sawirada Getty)
Tani waxay la jaanqaadaysay siyaasaddii arrimaha dibedda ee dawladda Soomaaliya ee Afrika, iyadoo taageeraysa, xag dhaqaale iyo xag anshax ahaanba, dhaqdhaqaaqyada gobannimo-doonka ee ka socda guud ahaan qaaradda, oo ah siyaasad inta badan lala wadaago Midowgii Soofiyeeti, oo ay Soomaaliya la saxiixatay heshiis saaxiibtinimo bishii Julaay 1974.
“Waxay noo arkeen inaan nahay ‘ergooyin samada’,” ayuu qoray Georgiy Ivanchenko, oo ah qoraa Soviet ah oo booqday waddanka.
“Waqtigaas waxaan filayay inaan ku imaado Boqortooyada Midowday (UK), deeq waxbarasho, laakiin taasi way is bedeshay maxaa yeelay Soomaaliya waxay bilowday inay ka sii fogaato reer galbeedka,” ayuu yiri Mohammed Abdulrahman. “Waqtiga ay Soomaalidu jeclaayeen Ruushka, waxaan dhibaato ku qabnay reer galbeedka sababo la xiriira khibrada gumeysiga, iyo waxa ay ku sameynayeen Afrikaanka kale.”
“Sanadahaas, ilaa dagaalkii Itoobiya,” ayuu yidhi. “Waxay ahaayeen sannadihii ugu wanaagsanaa, xilligii dahabiga ee Soomaaliya.”
“Markii aan ku noolaan jirnay magaalada Muqdisho noloshu aad bay u kala duwanayd,” ayuu dib u xusuustaa, isagoo i tusaya sawirrada magaalada 70-meeyadii. “Maalin kasta waxay la mid ahayd maalmaha fasaxa ee Soomaaliya. Waxaan shaqeynay ilaa duhurkii oo aan seexanay ilaa Casar, kani waa cabaadeena, markaan soo kacno waxaan fiidkii ku caweysan jirnay xeebta. Waxaan fariisan lahayn Jazira iyo Liido oo aan kubbadda dheelno, waxaan ku dabaalan jirnay badda oo waxaan ku cabbi jirnay shaah illaa Maghrib. ”
Dagaalkii Ogaadeeniya, bilowgii dhammaadka
Midowgii Soofiyeeti wuxuu si weyn u maalgeliyey Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (SNA), isagoo dhisey mid ka mid ah militariga aadka looga cabsado ee ka hooseeya Saxaraha Afrika. Markii la gaadhay 1977, iyada oo Itoobiya ay ku jirtay jahwareer, iyo isu dheellitirka awoodda oo si aan kala go ‘lahayn ugu hiilisay Soomaaliya, ayaa Barre wuxuu bilaabay duullaan dhulka ah oo uu ku qaaday Itoobiya si uu ugala dagaallamo Ogaadeenka, ama Soomaali Galbeed sida ay Soomaalidu ku tilmaamtay, kana soo baxdo gacanta Itoobiya. Duulaanku wuu guuldareystay, isagoo dharbaaxo culus ku ah dhanka militariga iyo siyaasad ahaan.
“Guul darradaasi siyaabo badan ayaa sharci-darro uga dhigtay xukunka Barre ee xukunka,” ayuu yidhi Professor Samatar. “Waxaan u maleynayaa inay ahayd isbedel dhanka macnaha ah taasoo muujineysay musalafnimada nidaamka marka laga hadlayo xagga maamulka guud iyo maaraynta dalka.”
Wuxuu intaas ku daray: “Horaantii 80-meeyadii waxaad arkeysay in xiisadda ay cirka isku shareertay.” Dadku sidaas uma farxin, dowladdana deyn badan ayaa ku jirtay. Khilaafka gudaha ayaa banaanka u soo baxay, kooxaysiga ayaa noqday mid la isku haysto dowladdii Barrena waxay bilowday inay ka sii darto oo kali-talisnimadii gurguuratay waxay isu badashay mid arxan daran.
Iyadoo aan la helin cid awood leh oo awood leh – maadaama siyaasaddii arrimaha dibedda ee adkeyd ee Barre ay ku guuldareysatay inay ku kasbato taageero ku filan oo reer Galbeed ah – iyo shil dhacay 1986 oo isbitaal la dhigay, maamulkii Barre wuxuu bilaabay rabshad si uu xukunkiisa u sii haysto.
Sawirkan oo lagasoo qaaday June 12, 1974, Magaalada Muqdisho, Madaxweynaha Soomaaliya Saciid Barre waxaa lagu arkaa isagoo gacantiisa ag jooga Madaxweynaha Tanzania Julius Nyerere shirkii OAU. (Sawirada Getty)
“Shilka gaariga wuxuu ka dhacay meel u dhow gurigeygii hore,” Abdulrahman ayaa u sheegay TRT World . Wadaduna badanaa waxay noqotay mid sibiibix ah marka roobku da’o, sidaa darteed gaadhigiisa ayaa rogmaday oo si xun u dhaawacay. Markii uu soo noqdayna awood buuxda umuu sii haynin, laakiin isaga iyo saraakiishiisu waxay bilaabeen inay dadka si xun ula dhaqmaan. ”
In kasta oo xaaladdiisa ay jirto, haddana waxaa u magacaabay xisbigiisa madaxweynenimada – hay’adda kaliya ee sharciga ah ee waddanka – wuxuuna ku guuleystay doorasho aan la tartamin oo isaga siisay toddobo sano oo aan xasilloonayn.
Tan waxaa uga sii daray tageerada itoobiya ee kooxaha kacdoonka ka wada wadanka taas oo keentay in barre uu shaqaalaysiiyo calooshood u shaqeystayaal duqeymo ka geysta magaalooyinka waaweyn sida hargeysa iyo burco, taas oo sababtay kumanaan rayid ah oo wax ku noqday. Ugu dambeyntiina, kooxaha fallaagada ah ee ku saleysan qabiilka ayaa ka adkaaday xukunkiisa ka dib markii uu ka booday doorashooyinkii loo ballan qaaday.
Magaalada caasimada ah ee Muqdisho waxay gacanta u gashay qabqablayaal dagaal iyada oo koonfurta inteeda badani ku soo degtay fowdo, halka Dhaqdhaqaaqa Wadaniga Soomaaliyeed uu sii xoojiyay guulaha uu mudada gaadhay ugu dambayntiina uu goostay, isagoo ku dhawaaqay dib u dhalashada Jamhuuriyadda Somaliland
Dhaxalka muddadiisa ayaa weli ku muransan Soomaalida dhexdeeda, in badan oo ka mid ahna waxaa lagu hayaa inta u dhaxeysa hilowga dal aan dowlad dhexe lahayn muddo ku dhow intii ay lahayd, iyo kuwii dhibbanayaasha u ahaa dambiyadii maamulkii Barre.
Qof kale oo ka hadlay magaciisa oo aan magaciisa la sheegin, oo aabihiis uu ka mid ahaa Ururkii Dhallinyarada Soomaaliyeed ee uu afgembiyey Barre, wuxuu yiri: “Maalmahaas wax badan ma aanan haysan, dambiyadiina waxay ahaayeen kuwo aan la cafiyi karin. Qaar ka mid ah xubnaha qoyskeyga ayaa dhintey, laakiin inbadan oo ila mid ah, dadku badanaa waxay dhahaan waxaan leenahay wadan inkasta oo dhibku inaga jiro. Talisku wuxuu u baahnaa in la soo afjaro, laakiin waxaan dhamaanteen rajeynaynay inay wax ka duwanaan doonaan wixii ka dambeeyay 1991. ”
Qof kale oo aan la hadlay wuxuu igu yiri: “Dhibaatada haysata kelitaliyeyaashu waxay tahay inay dumiyaan wax kasta oo ay dhisaan.” Wuxuu xasuustay xabsi yaraantiisii ​​markii lagu jiray mudaharaad lagaga soo horjeeday siyaasadaha cabudhinta ah ee Barre ee ka dhanka ah dadka diinta haysta ee diidan qaar ka mid ah dib-u-habayntiisa bulshada, taas oo meesha ka saartay aragtiyadii diimeed ee dhaxalka iyo labbiska.
Qaar waxay dhahaan isaga oo u rida sidaan u sameynay waxay ahayd qiime mudan in la bixiyo. Waan ku qanacsanahay aragtidaas, laakiin weli waxaa jira dad badan oo fiiriya ku dhowaad soddon sano oo aan ku qancin. Way adkaatay in dacwadda laga dhigo in hadda wax hagaagayaan.
Xigasho: TRT World